Ciidamada Dowada oo sheegay in ay dileen Xoogaga Alshabaab | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ciidamada Dowada oo sheegay in ay dileen Xoogaga Alshabaab
Ciidamada Dowada oo sheegay in ay dileen Xoogaga Alshabaab
Ciidanka milatariga Soomaaliya ee ka howlgala gobolka Baay ayaa howlgal ay sameeyeen gacanta kusoo dhigay dagaalyahano katirsan Al Shabaab oo ku sugnaa tuulooyin hoosyimaada deegaanka Owdiinle.
Saraakiil katirsan ciidanka milatariga oo howlgalka hogaaminayay ayaa sheegay in ay gacanta kusoo dhigeen afar dagaalyahan oo katirsan Al Shabaab oo ay sheegeen in dhibaato ku hayeen shacabka deegaanka.
Waxa ay sheegeen saraakiishan in ciidanka milatariga howlgalka fuliyeen kadib markii ay xog ku heleen in dagaalyahanadan katirsan Al Shabaab dhibaato ku hayaan shacabka ku sugan tuulooyin hoostaga deegaanka Owdiinle.
Xero milatari ay leeyihiin ciidanka dowlada ayaa la geeyay afarta nin ee la sheegay in ay katirsan yihiin Al Shabaab, waxaana xubnahan la sheegay in loo qaadayo magaalada Baydhabo si baaritaano loogu sameeyo.
Ciidanka milatariga iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa marar badan howlgalo ay sameeyeen ku sheegay in ay dileen dagaalyahano katirsan Al Shabaab kuwa kalana nolosha kusoo qabteen.
Previous articleCabdiweli Gaas “Xaq beey u leeyihiin Musharixiinta iyo dadka kale inay banaanbaxan, Farmajo dadka Caburinta haka daayo.
Next articleDalka Australia oo laga hergaliyay Suuq casri ah oo qaab Online ah loogu kala iibsanaya Geela duur joogta ah ee ku nool dalkaasi.
William Amos, oo laga soo doorto degmada Pontiac ee gobolka Quebec ayaa qoraal uu shaaciyay Arbacadii ku sheegay in "dhacdadaas ay yahay khalad nasiib...
Jilaaga caanka ah ee Bollywood, Sanjay Dutt, oo Imaaraatka Carabta...
Home MUQDISHO Rasaas dabaaldeg ah oo ka dhacaysa Muqdisho ka...
Maxkamad ku taalla Masar, oo go’aan ku gaartey dilka 12 xubnood,...